Miyaad rabtaa inaad ka qayb gasho Koobka adduunka ee Maarso? - World March
Miyaad rabtaa inaad ka qayb gasho Koobka adduunka ee Maarso?
Bogga ugu weyn » Miyaad rabtaa inaad ka qayb gasho Koobka adduunka ee Maarso?
Dunida March ee Nabadgalyada iyo Dagaal-la'aanta ayaa ah dhaqdhaqaaq bulsho kaas oo bilaabi doona safarkiisii ​​labaad ee October 2 2019. Dunida koowaad March ayaa lagu qabtay sanadka 2009 waxaana ay awoodeen inay kor u qaadaan Qiyaastii kun kun oo dhacdooyin in ka badan magaalooyinka 400. Munaasabad ballaadhan oo ka dhici doonta adduunka labaad ee Maarso waxa aad dooneysaa inaad mar kale soo gaadho oo aad ka adkaato.
March Adduunka ee Nabadda iyo nacaybku waxaa lagu qabanqaabiyaa kooxo la aragti ah bini'aadamnimada, kuna baahsan adduunka gool caadi ah in la abuuro iyo in la kordhiyo wacyiga baahida loo qabo in bulshada ku nool dunida ee ku nool nabad iyo nacaybku .
Taasina waa lagama maarmaan inay ka qaybgalayaasha cusubi ku soo biiraan qorshahan cusub. Haddii aad tahay mid ka mid ah iyaga oo doonaya in aan si fiican u ogaano, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad bogga internetka ka eegtid, si aad u aqriso maqaaladaha kale ee ku jira.
Waa maxay nooca ka-qaybgalka ee aanu dooneyno?
Tan iyo March Adduunka ee Nabadda iyo nacaybku waxaan u furan yihiin wax hay'ad, ururka ama si wadajir ah, shaqsi, meel kasta oo dunida ah oo doonaya in ay nala shaqeeyaan si ay mar kale taageeraan qorshahan. Sida kor ku xusan, March bilaabi doonaan 2 2019 October iyo adduunka oo dhan ayaa u safri doona, afjaridda 8 2020 ee March.
Iyadoo barnaamijkan wadatashiga ah uu ku talo jiro in shakhsiyaadka ama ururada ka muuqda dhaqdhaqaaqan, ay ku biiraan dabaaldegga iyagoo abuuraya waxqabadyo isku mid ah inta lagu jiro maalmaha socdaalku socdo.
Dhammaan waxqabadyada iyo ficilada la fuliyay waa kuwo aan faa'iido doon ahayn, taas oo ah, ma jirto wax dhaqaale oo dhaqaale ah, oo fulintana waa in ay isku maamulaan.
Waxaan raadineynaa jimciyadaha ama shakhsiyaadka u xil saaran iyo kuwa doonaya inay kaqaybqaataan oo ay abuuraan xariiq toos ah oo lala yeelanayo qabanqaabiyayaasha.
Hawlaha loo baahan yahay in la horumariyo waa in la hormariyaa si loo keeno tiro dad ah oo ku filan (carruur ama waayeel), Ugu yaraan kaqeybgaleyaasha 20 ayaa ku haboon.
Haddii aad rabto inaad kaqaybqaadato, laakiin aadan haysan fikrad ah hawl gaar ah, waxaan kula soo xiriiri doonaa si aad u soo jeediso tusaalayaal ka mid ah waxa bilaabi kara. Hase-yeeshe, soo jeedinnada waxaa sidoo kale loo sii wadi karaa oo si buuxda u hirgelin kara qofka mas'uulka ka ah waxqabadka illaa inta ay ku jiraan qaabka qiimaha bisha Maarso.
Waxaa lagu weydiin doonaa inaad dooratid maalinta ka socota 2 laga bilaabo Oktoobar laga bilaabo 2019 ilaa 8 laga bilaabo Maarso 2020, si loo faahfaahiyo hawlaha la doortay, taasina waxay noqon kartaa qayb ka mid ah hudheelka caalamiga ah ee socda. Iyada oo ku xiran taariikhda aan ku heshiinno, hawshu waxay noqon doontaa qayb ka mid ah Bisha Maarso, ama waxay noqon kartaa qayb ka mid ah Maarso labaad.
Marka diiwaan u yimid inuu email cinwaanka email aad ku qeexan, kaas oo bilaaban doona bixinta macluumaad dheeraad ah la xiriir, oo isku dayaya in ay soo ururiyaan xog ku saabsan in loo baahan yahay si guul leh u fuliyaan waxqabadka.
Had iyo jeer waa muhiim inaad haysato walax taageero ah (sawirada ama fiidiyowyada), si ay ula wadaagaan shabakadda internetka iyo shabakadaha bulshada ee ururka, taas oo abuureysa taariikhda taariikhda taariikhi ah.
Sidee loo qeybsamaa dhaqdhaqaaqa?
Dhamaan dadka ama ururada doonaya in ay isu-gooyaan inay abuuraan dhacdooyin yaryar ama waxqabadyo inta lagu jiro maalmaha maaradu socon doonto, kaliya waxay ubaahantahay in ay riixdo batroolkan ka-qaybgalka oo ka tagto xogtaada si aan kuugu soo xirriiri karno email ahaan, markaa waxaanu sheegi doonaa waxa lagama maarmaanka ah iyo waxaanu kuu soo jeedinaynaa karaa fikradaha qaar ka mid ah hawlaha ay sameeyaan.
Kalsooni oo ku soo biir dhaqdhaqaaq!
Naga tag macluumaadkaaga ka-qaybgalka
Ku-meel-gaar ah ayaa naafo ah ilaa laga furayo qalabka cusub. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah waad la xiriiri kartaa info@theworldmarch.org